मङ्सिर महिना तपाईको लागि कस्तो रहला ? कतै अनिष्ट हुने योग त छैन? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल ! - Kendra Khabar
२०७५, १७ मंसिर सोमबार ०४:४९
काम गर्दा आकस्मिक अड्चन आइलाग्न सक्छ । धैर्यपूूर्वक कार्य गरे अवश्य सफलता मिल्नेछ । महिनाको उत्तराद्र्ध अनुुकूूल रहनेछ । छोराछोरीबाट सुुख एवं सन्तोष प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा अपेक्षित समझदारी कायम रहनेछ । अनावश्यक खर्च हुुनसक्ने भएकाले विशेष ध्यान पुुर्‍याउनुुहोला । स्वास्थ्य एवं खानपानको ख्याल राख्नसके सम्भावित स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । यस मासिक राशिफल ‘नारी’ नामक राष्ट्रिय मासिक अखबारमा प्रकाशित छ। राशिफल फलित ज्योतिषाचार्य प्रीति आत्रेय ज्ञवालीले तयार पारेका हुन्।